खुसार्नीको एक्पाइरी डेट हुन्छ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
खुसार्नीको एक्पाइरी डेट हुन्छ?
के खुसार्नीको ‘एक्पाइरी डेट’ हुन्छ ? अर्थात के अन्य खानेकुरा झै सिमति मिति भित्र खुर्सानीको प्रयोग गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ? बोटबाट टिपेपछि कहिलेसम्म खान सकिन्छ खुसार्नी?
खुर्सानीको एक्पाइरी डेट हुन्छः
कहिलेसम्म प्रयोग गर्ने?
Previousकनकाई पुलमा शङ्कास्पद वस्तु फेला
Nextराति परेको चट्याङले ज्यान लियो
सांसद पक्राउ परेपछि राजपा बोल्यो, ‘सामान्य घटनालाई अतिरञ्जित बनाइयो’